एमाले र माओवादी पार्टीविच एकता आजै होला ? « Tulsipur Khabar
एमाले र माओवादी पार्टीविच एकता आजै होला ?
माओवादी केन्द्रको सचिवालयको बैठक पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को खुमलटारस्थित निवासमा सुरु भएको छ। पार्टी एकताका विषयमा निर्णय गर्न एकता संयोजन समितिको बैठक बस्नुअघि माओवादी केन्द्रको सचिवालय बैठक सुरु भएको हो।
केही बेरमै सिंहदरवारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा एमाले स्थायी समितिको बैठकपनि बस्दैछ। एकता संयोजन समितिको बैठक बस्नुपूर्व डाकिएका यी दुबै बैठकलाई निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ।
आजै अपरान्ह एमाले–माओवादी केन्द्रको एकता संयोजन समितिको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजना गरिएको छ। बैठकमा संयोजन समितिले निर्माण गरेका दुई कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गर्दैछन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमण अघि नै पार्टी एकता टुङ्ग्याउन चाहन्छन्, ताकि भारत भ्रमणका बेला संसदमा झण्डै दुई तिहाई बहुमत भएको पार्टीको प्रधानमन्त्रीका रुपमा नयाँदिल्लीमा प्रस्तुत हुन पाइयोस्।
त्यसैले, २३–२५ चैत्रमा हुने भारत भ्रमण अघि नै एकता टुङ्ग्याउने गरी आजै एकता संयोजन समितिको बैठक डाकिएको छ। एमाले स्थायी समिति र संयोजन समिति बैठक अगाडि–पछाडि डाकिएकाले आजको बैठक महत्वपूर्ण हुने अनुमान गरिएको छ।